एसिड आक्रमण बढ्दै, फेरि ६ महिने बालकमाथि प्रहार - TV Annapurna
अछाममा ६ महिनाका बालकमाथि एसिड प्रहार भएको छ । तुर्माखाद गाउँपालिका ४ चिसिका देवसरा बयकका छोरा मुस्कान बयकमाथि एसिड जस्तै मानिने ुकोरिसिभु केमिकल प्रहार भएको हो । मंगलबार बिहान ११ बजेतिर घरमा सुताइ राखेको अवस्थामा अपरिचित व्यक्तिले बालकको अनुहारमा एसिड फ्याँकेपछि उनको अवस्था गम्भीर छ ।
“घरमा छोरालाई छोडेको पाँच मिनेट मात्रै भएको थियो। अरु घरमा कोहि थिएन” आमा बयकले भनिन्, “म भैंसीलाई पानी खुवाउँदै थिएँ । छोरा रोएपछी घर आएँ । उसलाई निकै गाह्रो भैसकेको थियो।” श्रीमान् पनि खेतबारीको काममा निस्केको मौकामा छोरामाथी आक्रमण भएको उनको भनाइ छ।
घरबाट नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाँदा त्यताबाट कमलबजार रेफर गरेको र कमलबजारबाट जिल्ला अस्पतालमा पुर्‍याउँदा अवस्था गम्भीर भइसकेकाले नेपालगन्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा रेफर गरिएको अस्पतालका डा. मनोज बिष्टले बताए।
“यहाँ अक्सिजन दिने लगायतका सामान्य उपचारपछि तुरुन्त रेफर गरिसकेका छौँ” डा. बिष्टले भने, “भ्यान्टिलेसन उपकरण र विषेशज्ञ डाक्टर भए यतै उपचार सम्भव हुन्थ्यो।” बालकमाथि भएको घटना जिल्ला अस्पताल पुगेपछि थाहा पाउने बित्तिकै प्रहरी टोली घटनास्थल पुगिसकेको प्रहरी नायव निरीक्षक टेकबहादुर रावतले बताए।
यसअघि भदौ २७ गते रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ६ का जादोलाल दासकी दुई छोरीमाथि मध्यरातमा घरमै सुतिरहेका बेला तेजाब आक्रमण भएको थियो ।